Suuragal ma tahay in lagu shubto doorashada Mareykanka? - BBC News Somali
Image caption Laba sanduuq oo kuwa codadka ah. Sawirkan waxaa la qaaday 2012kii
Musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku andacoonayaa in "Isdabamarin dhanka codadka ah" ay ka jirto dalka Mareykanka. Balse, suuragal ma tahay in lagu shubto doorashada Mareykanka?
Kooxda u ololeyneysa Donald Trump waxa ay sheegayaan in "doorashada la xadayay" muddo bilooyin ah, waxayna eedeynayaan warbaahinta oo ay ku sheegeen daacad darro iyo aaminaad xumo.
Dooda Mr Trump ee ah in "Doorashada lagu shubanayo" waa eeddii ugu halista badneyd ee uu Trump usoo jeediyo.
Fikradda ah in doorashada Mareykanka lagu shubto ma ahan mid "qalafsan", "mana loo xadi kara qaabka uu Trump sheegayo," sidaasi waxaa sheegay Richard Hasen oo ah khabiir ku takhasusay sharciga doorashada.
"Ma suuragali karto in kumannaan qof ay 5, ama 15 jeer codeeyaan, ayagoo aanan la qaban," ayuu yiri Prof. Richard.
Image caption Qofka codeynaya waxaa laga doonayaa kaarka codbixinta